ITrans 450, iTrans Transit Bus yeTegucigalpa-Geofumadas
ITrans 450, iTrans Transit Bus yeTegucigalpa
NgoJuni, 2012 ezintsha, UkuCwangciswa kweziThili
Le yiprojekthi enomdla ngoku ephuculwayo eHonduras, phantsi kwendlela yokuhamba ngebhasi enguRapid Transit Bus (BTR). Nangona ngoku likweli nqanaba lokuqonda phambi kwabathuthi abangenakho ukucaca kwendlela ezibonakala ngayo izixeko, kubonakala ngathi yenye yeendlela eziphambili kuphuhliso lwe-axicial Planning ye-Territorial Planning kunye ne-Urban Mobility yeTegucigalpa.
Olu luvo lutshanje kumazwe akuMbindi Merika nangona yaqala kwiminyaka ye-70 eBrazil, apho lufikelele khona kumazwe amaninzi kumazwe aseMelika afana neColombia, i-Ecuador, iArgentina, iPeru, iChile, iMexico, iCanada, iUnited States nakwamanye amazwe aseYurophu kunye neAfrika Idume kakhulu kumazwe anezixeko ezixineneyo njenge China neIndiya.
Ke wona iibhasi nje ngaphezulu wanamathela ngomsila, kodwa indlela equka ulwakhiwo yokupasa iinkqubo trunked ezisebenza ngaphandle echaphazela eminye izithuthi, kunye zeBRT, busway, inkqubo yokhuseleko, iindlela ezicwangcisiweyo, sendawo kunye ubuncinane ubunenjongo ezimbini ezibalulekileyo: Yiba yindlela yokuthutha ngokukhawuleza kwaye ugcine inkonzo esemgangathweni. Yomibini le miceli mngeni yeyona ngxaki iphambili zendlela zemveli kwaye apho ngokuqinisekileyo kuya kubakho umsebenzi omninzi ngaphaya komda wezobuchwephesha kwesinye sezixeko ezinabantu ababi bokuziphatha okubi malunga nokhuseleko kunye nolawulo.
I-Trans 450 inephepha elinolwazi olunika umdla kubo bonke abanxulumene nemicimbi yokuCwangciswa kweTerritorial, ukuhlalutya ukuvela kwayo kunye nefuthe kunokuba luncedo. Siyayikhuthaza kuba izinto ezintle ezenzekileyo kufuneka zisikhuthaze ukuba simelane nazo umoya ongathembekiyo ukukholelwa ukuba asikho isisombululo.
Ngoko nantsi imimiselo ebalulekileyo yephepha le-Trans 450.
Ukucwangcisa nokucwangcisa izifundo zesigaba sokuqala.
Oku kubandakanya amaxwebhu amabini, ukuxilongwa kunye nenkqubo kunye nohlalutyo lweendlela ezikhoyo ze-12, ezibonisa indlela yokuziphatha ngomhla osebenzayo kunye nesidlo ngokubhekiselele kwi-SUBE / LOW.
Ngale nto siyazi indlela yokuhamba yabasebenzisi kwindawo yempembelelo.
Iiprofayili zomthwalo nazo zichongiwe ngokubaluleka kwabagibeli kwiindawo zokuhlola
Imephu engentla ibonisa intlekele njengoko ezo zindlela zili-12 zisebenza ngoku. Isiphithiphithi sebhasi simise isiqingatha seyure kwisikhululo, simisa kwiindawo ezingachazwanga, ukuvalwa kweendlela ezimbini zokuthintela enye elandelayo ... konke kuba umgibeli omnye uyalwa.
Ezi mephu zibonisa imfuno yabasebenzisi ngesitishi sokumisa, ngasekunene kolunye usuku lokusebenza, ngwevu kwi-SUBE kwaye kuluhlaza okwesibhakabhaka KAKHULU. Jonga ukuba ngemini yokusebenza zonke izinto ezenzakeleyo zigxunyekwe kwindawo yokuphela ngelixa ngosuku olungasebenziyo izikhululo zokumisa amaziko orhwebo endlela.
Iinkqubo ze-BTR zisebenza ngokwendlela kwaye ayisiyiyo umkhweli obanjiweyo, onokunika umsebenzisi isiqinisekiso sexesha kunye nokuhamba kwexesha. Kuninzi okunokufundwa kumaphepha omabini, nangona umboniso ulushwankathelo lofundo olupheleleyo kuphela, lubonisa phakathi kwemigca indlela esebenza ngayo imodeli yokuqiqa, indlela amaxabiso kunye nomsebenzi wokucaciswa kweziko ukuze ube loluntu kodwa ugcinwe umgangatho wawo.
Bona i zifundo
Oku kuphakanyisiwe kwi-API ye-Google Earth kwaye ibonisa ulwazi oluthile lolwazi kumacandelo alandelayo:
Ulawulo Nanku umda wedolophu, umda kamasipala kunye nabamelwane / indawo yabamelwane
Iindlela ze450 Trans. Ngomtya wejometri weetunks kunye nee feeders
Isimo Oku kubonakala ngathi kukudidi olunomdla, apho iikholoni zinombono wenqanaba lokungazinzi ekuhlaleni kunye nemfuno.
Nangona zizakubekwa njenge-kml ezine-interface ye-AJAX, kubonakala ngathi ilinyathelo elixabisekileyo lokubonisa abantu ngokufikelela kwi-Intanethi okungekho lula ukuchaza kwingxelo emfutshane yeTV kwaye nakanjani baya kuba nolwazi oluthe kratya njengophuhliso sebenza.
Nantsi imodeli ephakanyisiwe TransCAD, Isofthiwe ye-CAD / GIS esuka ku-Caliper
Bona iphepha lemephu
Ngokubanzi, kubonakala ngathi liphulo elinomdla elingasasebenziyo kwamanye amazwe nangaphandle kojoliso oluthile esilinike lona kumfanekiso olungileyo wale webhusayithi, kuba iHonduras yenza inyathelo elibalulekileyo kubuhlakani bayo. Phantse ngenkuthazo efanayo yoyilo loyilo lwee-boulevards zalo eziphambili kunye neringi yentsika kumashumi asixhenxe ...
Post edlulileyo«Ngaphambilini Isampula se-GeoSpatial Training Worksheet
Post Next Ixabiso leqhinga lolwazi lommandlaOkulandelayo »